Ibhodi le-Luminescent eliqinile & Abakhiqizi bamafilimu - IChina Luminescent board eliqinile & Abahlinzeki befilimu
Khanyisa eshidi le-Vinyl elimnyama
I-vinyl ye-self-adhesive Photoluminescent vinyl yokuzithobela inezindawo eziphakeme zokukhanya futhi ixhaswa ngezimpawu eziqinile zokuqina. Kutholakala kuma-roll we-1m x 50m noma ukusikwa ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende. Le micimbi isemaphepheni asongelwe futhi ivalwe emigqonyeni yamakhadibhodi aqinile ukuze kube nokuphepha nokugcinwa. Incazelo: I-vinyl eguquguqukayo yokuzivumelanisa ne-"Intensity High" C ...
Ifilimu entsha ye-2020 Photoluminescent
Ifilimu le-Photoluminescent lingumkhiqizo we-luminescent okhiqizwa ngesisekelo se-Photoluminescent pigment, Yifilimu ye-photoluminescent eyenziwe ngepulasitiki ethambile, ixhaswe ngephepha elinamathele, alinangozi futhi alinangozi. Akuqukethe noma yiziphi izinto ezinemisebe futhi iboniswa ukumunca ukukhanya okusheshayo.
Ishidi eliqinile le-Photoluminescent PVC liyinto ekhanyayo kumkhiqizo omnyama okhiqizwe ngesisekelo sombala omnyama we-afterglow photoluminescent pigment, Kuyibhodi eqinile ye-photoluminescent eyenziwe ngephepha lepulasitiki elilukhuni. Leli phepha eliguqukayo le-Photoluminescent PVC likhiqizwa ngokuxuba i-photoluminescent powder nama-resin amaningi we-PVC ngaphansi kwenqubo ethile.
Amabhodi we-Photoluminescent PVC Rigid
Ukuhlolwa kwedatha yezobuchwepheshe kwenziwa ngesilinganiso samazinga afanele ashiwo.
Ukuphrinta kwe-Silk-inki kanye ne-inkjet, isudi yama-inks solvent .Izicelo Zokuphepha Kwimibhalo Yezokuphepha signs Izimpawu ezixwayisa